:Bọchị: Jenụwarị 7, 2020
Ọkpụkpọ Ekwentị Mgbapụta Ọhụụ Ekwentị Ekwentị EnTaksi İzmir ewepụtara
Oge ohuru na njem tagzi amalitewo na İzmir. Ọgbọ ọhụụ oku taxi ọkpụkpọ oku “EnTaksi İzmir girdi ka etinyere ọrụ taa. N'ịga n'ihu wee bụrụ obodo mara mma, İzmir weere nzọụkwụ ọhụrụ na njem ọ bụla. [More ...]
Razọ ụgbọ oloko Baghdad
Akụkọ banyere 147 nke Baghdad Railway! Prọfesọ Edward Mead Earle dere n'akwụkwọ ya "1923 Ab na Abdulhamid nke Abụọ gbochiri ndị ala ọzọ ịgha ọzọ. Dabere na Prọfesọ Earle, II. Abdulhamit, na nkwado nke ikike ụfọdụ [More ...]
Sivas Logistics Center na Railway Njikọ Ewu
Sivas Logistics Center na Njikọ ilgbọ Mgbo (I Stage) Construction Work Tender Result Sivas Logistics Center nwere ọnụego ọnụ ọgụgụ nke 2018/309847 nọmba GCC 202.512.838,58 TL [More ...]
Balikesir Kiziksa Bridge dị mma
Balikesir Kiziksa Bridge OK: Balikesir Metropolitan Mayor Yucel Yilmaz mezuru nkwa ya, Manyas County Manyas mere na Kocasay, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge wuru. Obodo Balıkesir [More ...]
TCDD ga-ewere enyemaka onye nyocha; 4 Aga enyere ndị ọrụ nyocha aka ka ekenye ha na Nnyocha Mgbakọ nke TCDD General Directorate. A kọwara ule banyere ntinye n'okpuru. Datebọchị ule na Oge: Ederede [More ...]
Ngwọta Ntinye Smart Maka Antalya Urban Traffic
Ngwọta Ntinye nke ọgụgụ isi maka ikuku Antalya Urban: Okporo ụzọ dị nro ma nwekwaa ego na ụzọ ụzọ ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi. Obodo Antalya bụ otu n'ime ụzọ okporo ụzọ tara akpụ iji mee ka ọ kwụsị ịsọfe n'okporo ụzọ. [More ...]
EGİAD Trade Bridge na-aga n'ihu na-esetịpụ ihe atụ maka ụwa azụmahịa. EGİAD - Ndi otu ndi otu ndi ahia nke Aegean, nke bu otu n’ime nchekwube kachasi mkpa nke nzukota akuko (network) nke emere iji guzobe ma gbasa. [More ...]
CHP Tanal jụrụ: Ha rere ụgbọ ndị e jiri ụgbọ mmiri mee maka scrap?
Onye isi oche CHP Istanbul Mahmut Tanal, TCDD'de "ahịa na-abaghị uru ọfụma" agbakwunyere na atụmatụ nke Mgbakọ ahụ. Tanal jụrụ onye Minista Transportgbọ njem Mehmet Cahit Turhan ka ọ zaa ajụjụ a "A na-ebipụ ụgbọ agha ndị ọhụrụ wee ghọọ skrap? Tan. [More ...]
Denizli Ski Center emegharịala ndị ọbịa
Paradaịs ọcha na-esote Pamukkale sochiri nke abụọ nke paradaịs ọcha, Denizli Ski Center, na-akpagharị ndị ọbịa na ngwụsị izu. Denizli Ski Center, nke bụ ihe ọhụụ kachasị amasị ndị na-ahụ maka skai, bụ ihe kachasị ewu ewu maka egwuregwu oyi. [More ...]
Gịnị bụ Ọnọdụ kacha ọhụrụ na Project Gebze Metro?
Dr. Tahir Büyükakın, onye isi obodo nke ndị isi ala Marmara na Kocaeli Metropolitan Obodo; Yalçın Eyigün na ndị otu ya kwurịtara ọkwa ọhụụ nke Gebze Metro. Gebze Darıca [More ...]
Marathon Idea maka ihe na-enye obi uto Izmir
İzmir Obodo ukwu na Open Innovation Association na-ahazi echiche marathon akpọrọ 11 Hack12Mobility İdeathon İzmir ta na 4-10 Jenụwarị. Oge ngwụcha nke ntinye bụ Jenụwarị XNUMXth. Obodo Izmir nke obodo karia [More ...]
Akụkọ Agụghị Agụba Nostalgic na D inzce
Sakarya Metropolitan Municipality nke nostalgic tram project butere ebumnuche ahụ tramat nostalgic nke ewepụrụ mgbe etinyere ya afọ abụọ na Düzce agbataobi ya. Gịnị bụ ụgbọ okporo ígwè a tara akpụ? Emere Medyabar n'elu shelf mgbe afọ 2 gasịrị na Düzce [More ...]
Aka banyere nkwekọrịta Njikọ Tagbọala Tajikistan Afghanistan
Ọchịchị Tajikistan na Afghanistan na Dushanbe Celoleddin Balhi (Kolhozobod) -Cayhun-Nizhny Pyanc-Sherhan Bandar (Afghanistan) bịanyere aka na nkwekọrịta maka iwu okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Nkwupụta sitere na etiti akwụkwọ akụkọ nke oflọ Ọrụ Ọgbọ njem nke Tajikistan, [More ...]
Kwesịrị ikwu na a ga-akwụ ya ụgwọ maka ọnọdụ emepebeghị emepe n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Naanị otu n'ime ụzọ anọ nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul, nke a na-arụ ọrụ, ka a ga-akwụ ụgwọ n'ihi nkwa ndị njem na-emeghị emepe na mbido. SözcüDabere na akụkọ Basak Kaya, CHP Kocaeli Deputy Haydar [More ...]